Burnside Holiday Cottage, Craignure, Isle of Mull - I-Airbnb
Craignure, Scotland, i-United Kingdom
IBurnside Cottage Craignure ihlezi emaphethelweni aseningizimu yeCraignure bay enokubukwa kolwandle lwedolobhana/amachweba kanye nendawo yokudoba endala ngaphambili. Indawo enhle yokuphumula futhi ubuke izikebhe ziza futhi zihambe. IBurnsides iyindawo ekahle enethezekile ehlomele kahle yabashadikazi noma abangani.
ICraignure imaphakathi nesiqhingi nezitolo zayo zasemakhaya, izindawo zokudlela zamahhotela, amathilomu, indawo yokucima ukoma kanye nechweba lesikebhe esikhulu. Indawo yokupaka ingaphambili kodwa isevisi yebhasi enhle enyakatho naseningizimu isuka eCraignure njalo ngehora uma ungenayo imoto.
IBurnside ifakwe kahle kulo lonke, ngokufudumeza kukagesi namanzi. Ngengadi yayo yangasese ungangena endaweni ngomnyango ongaphambili ungene kuvulandi / ehholo, kukhona indlu yokugezela ngakwesobunxele yakho enokugeza / ishawa kanye nendlu yangasese. Kwesokudla kunegumbi lokulala elikhulu elibheke phambili olwandle / ukubukwa kwedolobhana. Ifakwe umbhede ongusayizi we-Queen, ongashintsha ube imibhede emibili eyodwa (sicela ucele lokhu lapho ubhukha) onekhabethe elikhulu namadrowa amaningi. I-Lounge kasayizi omuhle iqonde phambili inokubukwa kolwandle ukusuka efasiteleni elikhulu ukuya phambili. Leli yigumbi lokuphumula elilula elinomlilo ovulekile, ifenisha ethambile entofontofo, i-freeview sky TV (letha ikhadi lakho lesibhakabhaka) kanye netafula lokudlela ngemuva kwegumbi. Ngemuva nje kweLounge kunekhishi elihlomele ngakho konke ozokudinga - umpheki, ihobhu, ifriji/ifriji nemicrowave, iketela nethosta. Umnyango ongemuva ekhishini uphumela engadini yangasese engemuva enendawo evulekile enetafula nezihlalo. Ukusha kweBurnside kuhamba phansi nje engadini.
4.94 · 94 okushiwo abanye
Ukudla okuhle kunikezwa endaweni ye-Craignure pub eyi-100m nje ukusuka lapho.
Kokubili ihhotela neloji e-Craignure futhi kunendawo yokudlela engahlali futhi enhle uma ungafisi ukupheka. I-Craignure spar ne-Salen spar (imizuzu eyi-10 kude nangaphezulu)
Uma udinga noma yiluphi usizo - Sihlala imizuzu emi-5 kuphela edolobhaneni elilandelayo laseLochdon.
Hlola ezinye izinketho ezise- Craignure namaphethelo